कोरोना महामारी र प्रवासी नेपाली » Nepal Fusion	Nepal Fusion	कोरोना महामारी र प्रवासी नेपाली » Nepal Fusion
कोरोना महामारी र प्रवासी नेपाली
भारतका बिभिन्न सहरबाट कोरोना कहरमा देश फर्किएका नेपालीहरु पुनः भारततिरै आउँन थालेको समाचारले मन खिन्न भएको छ। गाउँ–घरमै आर्थिकपार्जन गर्न हम्मे–हम्मे परेका हामीहरुको ठुलो जमात अहिले पनि कोरोना महामारीका बीच आफ्नो काममा खटिएर दिनचर्या काटेकै छौ।
भारतमा कोरोनाको भयावह छ। यस्तो अवस्थामा यहाँ बाँचिरहनु निकै अप्ठेरो समेत छ। तर, बाँच्न कै लागि जन्मभूमि गएकाहरु फेरि महामारीकै बीचमा युद्ध स्थलमा फर्किदा नेपाली राजनीतिका फोहोरी खेलाडीहरुलाई लाज नलागेकै हो?
कहिलेकाहीँ लाग्छ – के मेरो देशमा सरकार छैन? के अहिलेको सरकार साला–साली, ज्वाई–सम्धी, छोरी–बुहारी र चम्मेहरुका लागि मात्रै हो? देशमा महामारी फैलिरहेको छ। तर, सरकार भ्रष्टाचारमै लिप्त भएका समाचारहरुले मेरो सरकारको चित्र प्रष्ट देखाएको महसुस भएको छ। कोरोना कहर एकतिर, गैरजिम्मेवार सरकार अर्कोतिर – भुमिका विहिन कांग्रेको तमासा कता हो कता – आखिर जनताको जीवनरक्षाका लागि को त? राजनीति के–का लागि मुम्बईको चर्को घाम–पानीका बीचमै पनि यतिसम्म सोचिरहेको छु।
यतिबेला म जुन देशमा बसिरहेको छु – के यो देशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिमुलक संस्था छैन? यदि छ भने कहाँ छ? र, कुन स्तरको मानिस बसिरहेको छ– मुख्य प्रश्न यो हो। नाम मात्रैको नेपाली दूतावास दिल्लीले कोरोनाबाट प्रभावित आफ्ना नागरिकको तथ्यांक समेत राख्न सकेको छैन। नेपाल सरकारले उक्त देशमा कार्यरत नेपाली नागरिक, बिभिन्न सामाजिक संघ–संस्थासँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने माध्यम हुँदा पनि दूतावास गुप्तवास छ। दूतावासले नेपालीहरूका निम्ति ‘हटलाइन’ नै सञ्चालन गरेर सेवा दिन र अनलाइनमार्फत् मनोपरामर्श सेवा प्रदान गर्न सकेको भएपनि देशको प्रतिनिधि संस्था भएको आभास हुने थियो। तर, त्यो अवसथा रहेन।
भन्न त सरकार निकै काम गरेको बताउँछ। तर, जता पनि भ्रष्टाचार र अत्याचार मात्रै देखिन्छ? के त्यहीँको सरकारको मुख्य काम? सिंहदरवारको अधिकार स्थानीय तहको घर–घरमा पुर्याउन उदेश्य साथ मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेता पनि यसको कार्यन्वयनमा उदासिनता देखिएको छ। केन्द्र र प्रदेश सरकार बीच समन्वय छैन। कर्मचारी समायोजनमा समेत सरकारले योग्यलाई प्राथामिकतामा राखेको छैन। कसरी चल्छ संघीयता? अर्कोकुरा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था झर्दो अवस्थामा छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम भन्दा धेरै टाडा र महत्वकांक्षी पनि छ। यसको मुल्यांकन गर्ने आधार आर्थिक परिसुचक पनि सकारात्मक छैनन। व्यापार घाटा छ, उत्पादनमा बृद्धि हुन सकेको छैन।
नेपाल–भारत बीचको कुटनितिक सम्बन्धमा सुधार आएको छैन। भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुलाई यसले कुन स्तरको समस्या परेको छ भन्ने समेत सरकारले हेक्का गरेको छैन। छिमेकी देशसँगको कुटनैतिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउँ नसक्नु सरकारको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो।